Dzese nhau dzeIOS 11 Beta 2 | IPhone nhau
Dzese nhau muIOS 11 Beta 2
Mazuva gumi nemanomwe apfuura, Apple yakatifadza nezvose zvitsva zveIOS 11 mune yakanakisa uye izere chirevo chekuburitsa Worldwide Developer Musangano. Uye kunyangwe zvichigona kutaurwa kuti chiyero chekuvhura chave chakaringana kana kushomeka, chokwadi ndechekuti kuuya kweyechipiri beta vhezheni kwakaita kuti vazhinji vedu vave vekusingaperi, uye kwete nekuti yekutanga inofamba yakaipa, zvinopesana, asi nekuti isu tine shungu yekuravira zvatakasiya taravira.
Nekudaro, nezuro Chitatu Chikumi 21, zvinowirirana neZhizha Solstice uye neEuropean Music Day, Apple yakaburitsa yechipiri beta vhezheni yeIOS 11 yevagadziri, chimwe chinhu chisina kujairika sezvo mabheja achiwanzoburitswa Muvhuro kana Chipiri, asi kunyangwe mune izvi kambani inoda kutishamisa.
1 iOS 11, kugadzikana kugadzikana
2 Chii chitsva muIOS 11 Beta 2?
iOS 11, kugadzikana kugadzikana
Zvakanaka, hongu, ndinofunga kuti hapana munhu anofanirwa kupotsa kuti tiri kutarisana neiyo beta vhezheni, ndokuti iOS 11 muyedzo vhezheni iyo inoitirwa vashanduri iine zvinangwa zvikuru zviviri. Kutanga, tsvaga zvese zvinokwanisika bugs uye zvikanganiso zvinogona kuvapo kuitira kuti zvigone kugadziriswa mushanduro dzekupedzisira; chechipiri, kuti vagadziri vanogona kugadzirira zvidzoreso kumaapplication avo kuti zviite kuti zvienderane nemabasa matsva eiyo inoshanda sisitimu.
Izvo zvinotevera kuti iOS 11, zvirinani mune yangu chaiyo kesi, yanga yakagadzikana zvakanyanya, izvo hazvireve kuti hapana kumwe kukundikana. Semuenzaniso, mumavhiki maviri aya Trello haina kuvhurwa, ini ndakave neanoverengeka asingatarisirw reboots paIpad, uye mamwe mapeji eSafari akavharawo zvisingatarisirwi.
Ine beta yechipiri yeIOS 11, Apple inoedza kugadzirisa zvikanganiso izvi, uye nevamwe vazhinji avo vanogadzira uye timu yeCupertino vanga vachiona mune yekutanga yekutanga vhezheni, asi mazhinji matsva matsva anounzwawo uye zvimwe zvezvinhu zvinozivikanwa zvinoenderera. Naizvozvo, kurudziro inoramba iri yeyakajairwa: iOS 11 Beta 2 haisi vhezheni yakatsiga uye nekudaro inofanira kungoiswa pazvidimbu zvechipiri. saka iyi haisati iri yakagadzikana beta vhezheni uye inofanira kungoiswa pane zvechipiri zvishandiso.
Pamwe pamwe neyakajairika bug fixes, nyowani bug fixes, uye zvakajairika kuita uye kugadzikana kugadzirisa, iOS 11 Beta 2 zvakare inosvitsa dzimwe nhau diki kugadziridzwa uye shanduko, senge idzo isu dzatichazokuudza pazasi.
Chii chitsva muIOS 11 Beta 2?
Pose, nomwe ndiwo mashoko yakawanikwa mune ino yechipiri vhezheni yeIOS 11 bvunzo:
Sarudzo nyowani muGeneral -> Multitasking inotibvumidza chinja marongero eDock pane iyo iPad kudzima iyo "Ratidza Zvazvino" sarudzo izvo zvinoratidza izvo zvazvino maapplication atakashandisa. Nekudaro, nesarudzo iyi yakaremara isu tichaona chete maapplication akaiswa muDock.
Sarudzo nyowani dze "Usakanganise uchityaira" basa.
Kufungidzira kunowedzera kutsigira mutauro we "Hindi", mumwe wemitauro miviri yeIndia.
Sarudzo nyowani ye dzora Control Center kubva kunyorera, iyo inodzivirira kuti irege kuoneka kana iwe ukasvetuka uye ichiita kuti iwanikwe chete kubva kuchiratidziro chekumba
Sarudzo nyowani dze shandisa zviyero zvekuyedza muSafari (Zvirongwa -> Safari -> Yepamberi).
Sarudzo nyowani ye "Sevha kumafaira" yekuchengetedza mapikicha, zvinyorwa uye mamwe mafaera muFiles application. Kana "Chengetedza kumafaira" pachishandiswa, menyu inoonekwa iyo inotibvumidza kusarudza nzvimbo. Sarudzo "Sevha kumafaira" inotsiva yapfuura yekuwedzera kuICloud. Pamusoro pezvo, masevhisi akadai seOneDrive, Bhokisi, Nyanzvi yePDF, uye mamwe zvino aratidzwa senzvimbo muFiles app, kunyangwe iwo matsva matsva asati abvumidzwa.
Nyowani nyowani apo pamusoro pechidzitiro chakadhonzwa kuvhura iyo yekuvharira skrini / yekuzivisa nzvimbo kana kana ichinge yadhonzwa kuti uwane iyo huru skrini zvakare.
Iwe unotsunga kuyedza iOS 11?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Dzese nhau muIOS 11 Beta 2
Imwe yetsikidzi isina kugadzikana yeBETA 1 yanga ichisiya dhairekitori mawaive nemaapplication akati wandei, iwo maapp icon akasiiwa ne "wiggle" athari, izvi zvakagadziriswa muBETA 2.
Pindura Miguel Antonio
Ivo vanofanirwa kugadzirisa kugadzikana kwebhatiri iyo inoramba ichidya yakawanda.
Iye zvino mamiriro ekumisikidza iwo mairi pazviri anoshanduka kuita dema kana chidzitiro chashanduka chena
Chinyorwa chakanaka ... asi kuvhara kwakaita kuti afe .. neiyo "iwe shinga kuedza iOS 11" hehe zvinonzwika sarcasm uchiziva kuti kuti uedze iwe unofanira kubhadhara $ 99 kugadzira account yekuvandudza ...
Mhoro ADV. Ichokwadi kuti ini ndaive ne "magumo anofadza" hahaha, kunyangwe saka pasina kutsvinya kumagumo angu e "Unotya kuyedza iOS 11?". HANDISI mugadziri, uye musi wa5 husiku ndanga ndichitoedza iOS11 pane yangu iPad, uye zviripo, ikozvino neBeta 2, uyezve, ini handina kubhadhara 99 madhora. Kuti icho chakanangidzirwa kune vanogadzira hazvireve kuti vamwe havagone kuzviedza, hongu, kwete kuburikidza nenzira dzepamutemo. Asi hei, kana ndikasatendisa iwe, iwe unogona kuona maitiro ekuyedza iOS 11 YEMAHARA usinga gadziri mune ino imwe posvo yandinokusiira pazasi. Ndatenda zvikuru nekutora chikamu uye ndinovimba "kuzokuona" zvakare pano.
Kwazisai ... ndatenda nerubatsiro uye samazuva ese kuvonga nekutichengeta tichiziva nezvenhau kwatiri padanda ... inzwa kujekeswa ... Ndinovimba hauna kutora iko kuseka zvisirizvo haha ​​ndizvozvo ini ndinowanzo nyomba tenda kwandiri kuti amai vangu Zvinodaro uye vanamai havabiridzi haha ​​... Ndakaziva kuti inogona kuiswa asi ini zvakare ndinoziva kuti kudzima kana kutangazve foni kwakanamatira pane dema skrini ichiti iwe unofanirwa kuita kudzoreredza nekuisa iOS 11 iyo ichiri isingawanikwe «isu» ... chimwe chinhu ndechekuti ndakashanyira yako link uye ini ndinongowana mabhokisi mana, yekutanga yakapenda pingi iyo inoti iOS inogadziridza Yechipiri. nditevere pa twitter chechitatu kudhawunirodha app kuti uende kuforamu uye wechina unoti nhamba yekutora pasi iyo "update" yandave nayo ndiri kuvhura iyo link muSafari asi haitombondipa otomatiki kuti ndiise chimiro kana imwe dhanilodhi rekuburitsa remaprofile akadaro mune mashoma mazwi ini handizive kuti seidhawunirodha chimiro cheiyo iOS 4 rubatsiro rwako rwaizondibatsira zvakanyanya… maita basa !!!
Yangu iPhone yakagadziriswa beta 2 asi wachi yangu haina uye ini ndatoita zvese. Vamwe vanobatsira?
Mwedzi mitanhatu mushure mekusiya Apple kunoshanda kuTesla, Chris Lattner anosiya kambani yaElon Musk
Iyo Apple Watch inogadzirira shanduko huru kune vane chirwere cheshuga